यसकारण कोरोना उपचारमा अब्बल बन्यो निजामती अस्पताल – Health Post Nepal
यसकारण कोरोना उपचारमा अब्बल बन्यो निजामती अस्पताल
२०७८ जेठ १२ गते १५:१६
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा रहँदा धेरै अस्पतालहरुलाई उपचार व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्‍यो ।
कतिपयले अक्सिजन अभावको कारण देखाउँदै भर्ना नलिने घोषणा गरे भने कतिपयमा बेड अभाव देखियो। तर निजामति कर्मचारी अस्पतालले भने कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको छ।
सोहीकारण सरकारले अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रुपमा परिवर्तन गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग¥यो।
यद्यपि अस्पताल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।
स्वास्थ्यको निर्णयसँगै अस्पतालले १४ बेड, ३ भेन्टिलेटर, २२ एचडियु र आकस्मिक कक्षलाई कोभिड विरामीका लागि तयार गरिसकेको छ। अहिले अस्पतालमा थुप्रै कोभिड तथा ननकोभिडका विरामीले उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।
अस्पतालमा झण्डै ८५ विरामीले दैनिक सेवा पाइरहेका छन्।
कोरोनाका बिरामीको चाप नबढोस् भनेर अस्पतालले पहिले नै यसको व्यवस्थापन गरेको कोभिड फोकलपर्सन डा. सुमनबाबु मरहठ्ठाले बताए।
‘हामीले बिरामीको अवस्था हेरेर कसलाई बेड चाहिने र कसलाई आइसीयू चाहिने पहिले नै उपचार गरेर छुट्याउने गरेका छौं,’ उनले भने।
‘सामान्य बिरामीका लागि ओपिडी सेवा सुचारु गरी चेकजाँच गराइरहेका छौं। विरामीको अन्य केही उपचार गराउनुपरे वा इन्भेष्टिगेसन गराउनुपरे सोही अनुसार छौं। त्यस्तै भर्ना गर्नुपर्ने विरामीलाई काभिड वार्डमा लगेर उपचार सेवा दिइरहेका छों,’ डा मरहठ्ठाले भने।
त्यस्तै उपचारमा फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यहाँ अन्य अस्पतालहरुबाट पनि कोरोनाका बिरामी आउने गरेका छन्।
बिरामीको अक्सिजन लेबल घटेको, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको, जटिलतालाई हेरे डाक्टरले एचडियु, आइसियु तथा अन्य उपचारमा पठाउने गरेका छन्।
कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर कोभिड टास्क फोर्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसमा विभिन्न डिपार्टमेन्टका डाक्टरहरुले उपचार गरिरहेका छन्।
एनेस्थेसिया, जनरल प्राक्टिसनर र मेडिकल शाखाले उपचार दिइरहेका छन् भने अरु शाखाका डाक्टरहरुले टास्क फोर्स टोलीलाई मद्धत गर्छन्।
‘जनरल वार्डका स्टाफ नर्स तथा मेडिकल डाक्टरहरुले अन्य विरामीहरुलाई सेवा दिनेग रि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
अस्पतालले आवश्यकता अनुसार शय्या तथा सेवा थप्दै गएको मरहठ्ठाले बताए। अन्य अस्पताल जसरी यस अस्पतालले पनि अस्पतालमा शय्या बढाउने तरखर गरिरहेको थियो।
हाल ९० शय्या सञ्चालनमा ल्याइरहेको अस्पतालको १५० शय्या पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर अक्सिजन अभावका कारण उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनी बताउँछन्।
सिसिएमसीले हरेक अस्पताललाई अक्सिजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दा अस्पताललाई निकै कठिन भएको बताउँदै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो अधिकार प्राप्त गरेपछि केही हदसम्म सहज भएको बताए।
‘हामीलाई कोटा तोकिदिँदा भनेजति नपाउने, पाए पनि घण्टौं कुर्न बस्नुपर्ने र आफ्नो हकको अक्सिजन पनि अरुले लैजाने गरेका थिए,’ उनले भने।
अहिले कठिनाई भए पनि भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। अस्पताललाई दैनिक १५० अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक पर्दछ।
अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भएका कारण ५० वटा सिलिण्डरमात्र उत्पादन गर्दछ। दैनिक १०० अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक पर्छ।
भेन्टिलेटर तथा एचडियुमा रहेका विरामीको अवस्था हेरेर अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९० सिलिण्डरमात्र कोटा तोकेको छ भने, अस्पतालले आफ्नै पहलमा थप सिलिण्डर जुटाईरहेको छ।
थोरैमा १०० र बढीमा १५० सिलिण्डर दैनिक प्राप्त भए अहिले उपचारमा रहेका विरामीलाई पुग्ने उनी बताउँछन्। सरकारसँग समन्वयन गरेर ९ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याइएको छ।
यसले गर्दा आकस्मिक सेवामा आएका विरामीलाई उपचार गर्न सहज भएको छ। अस्पतालले धेरैभन्दा धेरै कोरोनाका विरामीहरुलाई उपचार दिने योजना बनाए पनि अक्सिजन अभाव भइदिँदा योजना भने सफल बनाउन नसकिएको मरहठ्ठाले बताए।
‘हामीले आजसम्म विरामीलाई उपचार गर्न नसकिने वा ठाउँको अभावमा फर्काउने गरेका छैनौं, तर अक्सिजनको अभावले समस्या भने पारेको थियो,’ उनले भने।
यसबाहेक अस्पतालले थप अक्सिजन प्लान्ट पनि निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। अस्पतालले ननकोभिड बिरामीलाई पनि सेवा दिइरहेको डा मरहठ्ठाले बताए।
‘हामीले सर्जरी, प्रसूतिजस्ता केशहरु पनि लिइरहेका छौं। पहिलेभन्दा उपचार सेवा कम भए पनि अन्य रोगका विरामीलाई उपचारबाट वन्चित गरेका छैनौ,’ उनले भने।
कोरोनाका विरामी र अन्य रोगका विरामीहरुका लागि छुट्टै च्यानल बनाइएको छ भने डाक्टर र नर्सहरु पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिएको छ। हरेक दिन ११ जना नन्कोभिड विरामी उपचाररत छन्।
अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश अस्पतालले पनि सहयोग गरेको छ। अस्पताल परिसरमा कोरोनाविरुद्धको खोप सँगसँगै पिसिआर परीक्षण पनि गराइँदै आएको छ।
हरेक दिन १५० जनाले पिसीआर परीक्षण गराइरहेका छन्। दोस्रो लहर सुरु भएपछि अस्पतालले पिसीआर परीक्षण सुरु गरेको हो।
यसबाहेक एन्टिजेन परीक्षण, कोभिड क्लिनिक, फिभर क्लिनिक, भेन्टिलेटर, आइसियु सञ्चालन गरिरहेको छ। पहिलो लहरमा जम्मा ७ देखि १० शय्याको कोरोना विरामी हेरिरहेको यस निजामति अस्पतालले दोस्रो लहरमा धेरै मानिसहरुलाई गम्भीर असर गर्न थालेको देखेर कोरोनाको उपचार गर्ने निणय गरेको उनी बताउँछन्।
सबैभन्दा मुख्य कुरा त अस्पतालले कोरोना विरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्कर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा भत्ता दिने योजना बनाइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउनकै लागि यस्तो निर्णय गर्न लागेको उनले बताए।
One thought on “यसकारण कोरोना उपचारमा अब्बल बन्यो निजामती अस्पताल”
Dr. Ajit Mallik says:
SuchaNice Writeup. #HPN & Team# your Contribution for proper information in this Pandemic will be always Appreciated.